FAHAZARAN-DRATSY : Nisy ireo vahiny nasaina teny Iavoloha no nisakelika sakafo nody
Tongo-bakivaky. Nipitrapitra nampalahelo ny vahoaka madinika izay mahantra tsy misy mpijery fa ireo vahiny nasaina teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha kosa dia nihinana sy nihanoka ny sakafo be sy hanimpitoloha. 9 janvier 2017
Araka ny fomba ratsy mahazatra ny Malagasy sasany dia nisy tamin’ireo vahiny nasaina koa no tsikaritra nivimbina sakafo nody natao tamin’ny harona sachet.
Ankoatra izay ny vahoaka isan-tokantrano kosa dia maro no tsy nanan-kohanina noho ny fahantrana nianjady tamin’izy ireo, raha ny teny Iavoloha nanao izay daniny kibony nanao havokisana hatreny an-tenda kely. Soa fa nisy ny Weak-Up Madagascar nitondra fanakianana sy fampahatsiarovantena ho an’ireo mpitondra, tetsy Antaninarenina, momba ny fanasana sy ny fihinanambe teny Iavoloha, ny zoma lasa teo.
“Raha nisy vola nolaniana teny an-dapa, maninona no tsy nojerena ny fahasahiranan’ny vahoaka izany, na nokarakaraina ny sosialim-bahoaka ?”, hoy izy ireo. Tamin’ny lahateny nataon’ingahy Filoha aza dia tsy nisy ny kabary mikasika izay sosialim-bahoaka izay mihitsy.
Raha misy marina ny fijerena ny vahoaka madinika izay nametraka izao fitondrana izao teo amin’ny toerana, dia tokony ho izy ireny no jerena mialoha, fa lasa natao anjorom-bala izy ireo amin’izao fotoana izao. Maro amin’izy ireny no mikaikaika fa efa tafiditra ao anatin’ny fahantrana lalina tanteraka izy ireo satria ny hohanina anio tadiavina rahampitso.
Azo lazaina ary hita taratra tamin’izany fa nandatsa ny vahoaka tamin’ny fihinanana sakafo ny mpitondra niaraka tamin’ny vahiny maro nasaina.
2017-01-15 17:11:30 par JF
Olo-manankaja daholo ny tany fa ny tena malagasy madinika sy maro an’isa kosa tsy voaresaka.
Ka rehefa mbola nisy nitondra nody dia midika izany fa tsy lany ny sakafo tany !
Hoy aho hoe : "hoano fa adala tompo sy adala mpitondra".